विवाहपछि युवतीहरु मोटाउनुको कारण यस्तो पो रहेछ ! • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
२० असोज । विवाह हुनुभन्दा पहिला हरेक युवती स्लिम रहन हरेक प्रकारका प्रयासहरु गर्छन् । उनीहरु नमोटाउनकै लागि खाने कुरामा धेरै ध्यान दिने गर्छन् । तर, विवाह पछि उनीहरुको शरिरमा ठुलो परिवर्तन देखिन्छन् । विभिन्न कारण स्लिम युवती मोटाउँछन् र आफ्नो शरिरलाई ध्यान दिन सक्दैनन् । तौल बढेका कारण उनीहरु विभिन्न समस्याबाट ग्रसित हुने गर्छन् ।
विवाह पश्चात लाइफस्टाइलमा आउने परिवर्तनका कारण पनि उनीहरु आफ्नो शरिरलाई ध्यान दिनसक्दैनन् । आउनुहोस् हेरौ विवाह पश्चात किन एकाएक मोटाउँछन् युवतीहरु विवाह पश्चात धेरै जोडीहरु बाहिर घुम्ने र बाहिरको खाना खान धेरै रुचाउँछन् । बाहिर खाना खाँदा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरुमा उनीहरु ध्यान नदिने गर्छन् । बाहिर धेरै खाना खानले शरिर बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ । जुन मोटोपनको कारण बन्न पुग्छ ।